Australis: Xiriirka cusub ee Firefox wuxuu soo hagaagayaa maalin kasta | Laga soo bilaabo Linux
De Australis waxaan horay u haysanay hadlay ku filan en Laga soo bilaabo Linux oo maalmaha soo dhaafay, waxay dareenkeyga qabatay in soo jeedintan cusub aan looga hadlin websaydhada Mozilla, markaa waxaan soo degsaday nuuca ugu dambeeyay ee la heli karo si aan u arko sida ay u egtahay.
Aniga oo yaaban ayaa afkaygii waxaa iigu soo baxay dhadhan macaan. Marka hore, sawirka tabsku hada si sax ah ayuu umuuqdaa, ma ahan noocyadii hore ee sida xun loogu rakibay daaqada.
Waxaa laga yaabaa in waxa kaliya ee aanan jeclayn ay tahay in astaamaha ku teedsan bar tilmaanta ay xoogaa weyn yihiin mana aanan helin dariiqo aan ku beddelo cabirka, ugu yaraan xulashooyinka qaabeynta.
Astaamaha caadiga ah ee Liiska mideysan (kaas oo hadda qaata qaab la mid ah Chromium, Midori iyo Rekonq) waxay leeyihiin muuqaal nadiif ah oo raaxo leh, anna waxaan jeclahay habdhaqanka xoogaa yar, maadaama uusan lahayn menus-yada taasna waxay ka dhigeysaa wax yar faragelin.
Badhanka cusub ee loogu darayo boggaga Calaamadaha waxay iila muuqataa guul, maaddaama ay u qaybsan tahay laba, qayb qayb in lagu daro goob (kaliya adoo gujinaya xiddigga) iyo qaybta kale si loo helo kuwa aan kaydinay.
Maxaa kale oo aan dhihi karaa? Waa hagaag, waxaan qorsheynayaa inaan la joogo nuucaan muddo dheer si aan u sii wado horumarkiisa. Hadda waxaan jeclahay interface-kan cusub.
Haddii aad rabto inaad kala soo baxdo nooca ugu dambeeya ee Firefox Australis (Ingiriis ahaan), waxaad ku sameyn kartaa xiriiriyahan:
Soodejiso Firefox Australis
Hadda waa inaan kaliya ku dhejiyaa Isbaanish (Waxaan rajeynayaa inay suurtagal tahay). Waxaa la filayaa in Australis si rasmi ah loo sii daayay nooca 25 ee Mozilla Firefox Dhamaadka bisha oktoobar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Australis: Qaabka cusub ee loo yaqaan 'Firefox interface' ayaa soo hagaagaya maalin kasta
waxay umuuqataa mid heer sare ah, waan isku dayi doonaa
Waxaad arki kartaa inay si adag u shaqeeyeen nuqul kasta oo daqiiqad ah oo faahfaahin ah oo ku saabsan iskudhafka Chrome, iyo hadda xitaa liiska sidoo kale. Wanaagsan 😉
Ahem !! Iyagu ma aysan koobiyeyn menu-ka 'Chrome', kaliya booska ay ku fadhiyaan baarka. Meenuga sida (nuxurkiisa) kuma haysto habkaas biraawsar kale.
Laakiin sida guddi yar oo noocaas ah, waxay kugu qasbeysaa inaad gasho ku saabsan: ku saabsan | ku saabsan: config in la sameeyo dhammaan shaqooyinkaas oo ay tahay in laga helo guddiga dookha.
Hagaag, waxaan rajaynayaa inaad ubadali karto qaabkii hore, anigu waxaan kamid ahay kuwa diidan Australiyaanka ... inkasta oo hadii ay kudariyeen qarinta cinwaanka nidaamka (nasiib daro waxaan haystaa shaashad shaashad weyn sidaa darteed waa inaan sameeyaa waxkasta oo suurtagal ah si aan u badbaadiyo pixels ee taagan) si fiican u soo dhawow 😀
Waxaan ka fikiraynaa isla wax, maaddaama interface-ka hadda jira uu yahay nooc la safeeyey oo ka mid ah is-dhexgalka Opera (Daacad baan ahay, waan jeclahay inay ka fiican tahay Google Chrome interface).
Australiyaanku wax cusub ma abuuraan shaqsiyanna ma jecli wax badan. Laakiin waa goor dambe in la buuqo oo laga hadlo muuqaalka Firefox, waxaan joognaa 2013, waxa kaliya ee muhiimka ah ayaa ah inaysan dib uga dhicin xagga waxqabadka marka loo eego tartanka. Ama wali sifiican, in aan maareeyo inaan ka adkaado.
Iyo in mishiinka hayaya Gecko lagu dari karo astaamo sida xawaaraha xawaaraha.
Waanu isku dayeynaa
Kani waa Chrome Oo
Laakiin leh mishiinka muujinta Gecko. Chrome-ka dhabta ahi wuxuu leeyahay WebKit leh Blink.
Mozilla Chrome 😛 xD
Opera waxay lahayd kahor Chrome tabs-yada sare iyo isla qaabeynta, marka laga reebo Menu-ka. Midori, Rekonq, iyaguna way leeyihiin iyaguna way soo baxeen oo hadda waa Mozilla Chrome? Xun waan tagnaa .. 😛
Ma aqaan ... Waan ogahay inay u muuqato xD fool xun.
Sidoo kale, haddii Google Chrome uu adeegsado Blink oo leh Webkit iyo Opera ayaa si dhib yar u isticmaali doonta Webkit si ay uga tagto mashiinka Presto, Mozilla Firefox si dhib yar ayey u isticmaali doontaa mashiinka muujinta Gecko ee desktop-ka Firefox oo keliya, iyo Webkit-ka Firefox OS (malahayga, si cad) .
Sikastaba, mishiinka dhiibida Gecko ayaa sida ugufiican uga shaqeeya Debian (Chromium / Chrome, waxay i siineysaa saameyn roobaadka, maadaama aanan aqoon sida loo xaliyo dhibaatadaas bixinta).
Waxay dhibaato ku noqon doontaa wadayaasha fiidiyowgaaga.
Ma ahan fiidiyowga, maadaama dhibaatadaasi aysan aniga igu dhicin midkoodna Iceweasel iyo Opera toona.
Sida oo kale, waxaan adeegsadaa mawduucyada si aan u beddelo qaabka loo yaqaan 'firefox', markaa dhib ma leh haddii aad u aragto mid fool xun ama aan ahayn, kaliya ku beddelo muuqaalka mawduuc qaar waana taas and
Waa Mozilla Chrome. Browsers-ka ayaa waligoodba soo guuriyeen shaqooyinka qaarkood, qaabeynta walxaha, iwm, laakiin waligood si cad ugama soo guurin farshaxanada shabakad kale ficil ahaan wixii faahfaahin ah waxayna ku xayeysiinayeen "naqshadooda". Australis waa nuqul ka mid ah muddada Chrome.
Laakiin dhab ahaantii layaab ma leh, haddii is-dhexgalkii hore ee badhanka badhanka Firefox uu "u waxyooday" midka Opera, iyadoo la adeegsanayo tabkaan wareegsan iyo menu-ka Chrome, waxay sii wadaan inay fikradaha ka qaataan daalacashada kale, wax aan xumaan ahayn kaliya kormeer.
Waxaa jira waxyaabo badan oo dabacsan oo adduunka ka baxsan .. Runtii waan sameeyaa 😛
Chrome fanatic maya, Opera haa, waxaan u adeegsaday 8-da .. Aniga ahaan illaa iyo 12-keedii waxay ahayd ta ugu casrisan ee daalacashada 🙂. Hadda waxaan adeegsadaa Chromium maxaa yeelay waa midka ugu fiican "ugu fiican" (ugu yaraan laptop-kayga) bogagga leh waxyaabo badan, gaar ahaan sawirrada. Waxaan rajeynayaa inaan arko Opera oo dib u dhalanaya oo aan ku soo laabto: ')
Opera? Opera dib ayey u dhalatay waxaana loo yaqaan Chromium 😛
Hadday taasi tahay dib-u-dhalasho markaa waxaan sugayaa inay mar kale u bislaato astaamihii ay lahayd oo ay si cad u muujisay penguin xD
Opera waxay Chromiun ka dhigeysaa mid la isticmaali karo
Haddii ay hagaajiyaan mishiinka muujinta Webkit si HTML5 iyo Flash Player fiidiyowyadu aysan ugu muuqan roob, waan sugi lahaa. Waqtigaan la joogo, waxaan ku dheganaanayaa Iceweasel iyo Opera 12.16 (in kasta oo aan Chrium ugu isticmaalo xisaabteyda Google iyo Tweetdeck ee Hootsuite.
@ eliotime3000: Waxaan isticmaalaa Chromium oo waxaan daawadaa HTML5 iyo Flash videos, waligayna ma arkin saamaynta "roobka" ee aad ka hadlayso.
Waa tan dhibaatadeyda Chromium iyo Google Chrome >> forum.fromlinux.net/viewtopic.php?id=1954
@elio Waxaan u maleynayaa inay taasi tahay dhibaato Debian ah, kaliya waxay igu dhacdaa aniga nidaamkaas iyo asalkiisa tooska ah.
@cat ma aanan ogeyn taas. Waxaan rajeynayaa inaan xal u helo si dhibaatadan aysan markale ugu dhicin Chromium / Chrome (ilaa iyo hada, cidina ma xalin dhibaatadaas aniga).
Haddii Firefox ay ka tagi laheyd tabta hoose kuwa badan «» GILES «» waxay dhihi lahaayeen Firefox waa la duugoobay maxaa yeelay waxay isticmaashaa tabka hoose.
Waa inaad ahaataa mid ujeeddo leh, waxa ay tahay inaad qiimeyso waa waxqabadka biraawsarka iyo shaqadiisa.
Milkiilihii runta ayaa hadlay.
Oo yaa kuu sheegay inaadan cirifka ahayn? Laakiin ma si fiican ayaad saaka muraayada uga daawatay?
Macno malahan inta aad ku darsatay LibreOffice ama sida cajiibka ah astaamahaagu u yihiin ama inta hartay ee aad ku kacdo (ma jeceshahay sida ay taasi u dhawaaqeyso?) Hadaadan haysan qaab xushmad u leh xulashada dadka kale.
Kaalay, waxaan ku sii waday inaan banaanka si fiican u ekaano.
Ka dhig isaga sharciga barafka, kaliya.
Sida isticmaalka tabka, dhibaatadu waxay tahay sida loo ogaado sida loo dhaqan geliyo. Hadday yiraahdaan hadday taariikhaysan tahay iyo in kale, dan kama lihid.
Dhinaca dhinaca gaas, runtu waxay tahay ma arko wax macno ah oo aan ugu yeerayo sidaas. Waxaad ugu yeeri kartaa nacas ama macno kale oo xun oo la mid ah, maxaa yeelay waxaa jira dad ku farxa marka uu mid aad u edeb daran yahay ama u caroodo, una dhaqmo sida dadka waalan iyo milkiilayaasha runta.
Xaaladdan oo kale arrinta tabku waa mid labaad, anigu dan kama lihi haddii ay yihiin kuwo wareegsan, laba jibbaaran, ka sarreeya, ka hooseeya ama dhinac ah.
Waa sidaad sifiican u tilmaamtay: «... waa mid edeb daran ama aad u xun, waxayna u dhaqmaan sida dad waalan oo milkiilayaasha runta ah.»
Waxbadan kudarsaday FLOSS laakiin leh maskaxda maskaxda iyo damqasho.
Irvandoval ayaa ku martiqaadaya waxa aad cabeyso, weligey ma arag chrome leh tabs wareegsan oo xitaa kayar oo leh menu-ga la hagaajin karo oo lagu sameeyay badhamada. 😀
Aniga oo jecelahay tabta ugu fiican waa kuwa sublimetext, kuwaas oo aad ugu eg kuwa chrome laakiin xoogaa qaabaysan.
Ku jawaab quebec
Oo waxay ka saareysaa inta badan astaamaha qaabeynta, majiro bar dhejis dheeri ah, majiro salka hoose, majiraan qalab qalab khaas ah.
Waa Mozilla Chrome dhab ah, oo xaddidan oo aanad dib dambe u samayn karin wixii ay Australisiyadu awoodeeda ahayd inay horay u sameyso
rm Australis, ayaa la yiri.
Faallo la'aan :).
Waqtigaan la joogo, Australis waa tijaabo si wanaagsan u socota, in kasta oo aan ku sii wado isdhexgalka hadda maxaa yeelay mar hore ayaan u adeegsaday tan iyo nooca 4 ee Firefox waana jeclaa.
In kasta oo ay u egtahay mid la mid ah Chrome, waxaan rajeynayaa inay tahay nooc ka mid ah Chromium-ka la hagaajiyay iyo inay kor u qaadayaan mashiinka muujinta ee Gecko inta ugu badan.
Waxay umuuqataa mid fiican
Naxariis leh mawduuca astaamaha sharaxaad ka bixinaya, haddii kale waxay umuuqataa mid hagaagsan.
Ugu dambeyntii FF waxay noqotaa mid qurux badan oo la isticmaali karo!
Aragtidayda, sidii FF 4 waxay ahayd mid la isticmaali karo oo qurux badan (menu-ka laftiisu wuu ka fiican yahay Opera's).
Qof kasta oo isagu isku magacaaba barnaamij soo saare web oo aan isticmaalin Firefox waa inuu leeyahay dhibaato soo saar leh oo culus marka uu abuurayo xaashiyaha qaabkiisa
wareeg + f7
Waan jeclahay isdhexgalka cusub, laakiin markaan aqriyay maqaallada noocaan ah waxaan xasuustaa sababta aan u hayo cudurka 'versionitis', laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii ay suurta gal tahay goorta aan iibsan karno taleefanka gacanta oo leh firefox os ee Mexico, weli waxaan haystaa w200 waa in la dilaa
Jawaab Jeus Israel Perales Martinez
Sidaas oo kale. Qalabka horumariyaha Firefox waa mid aad uga ballaadhan kana macquulsan kan Chrome.
waxa dareenkeyga soo jiitay ayaa ahaa dulucdaada guud, waxaan u adeegsanayaa isla mowduuca ku saleysan OS X laakiin ku saleysan XFCE 😀
Taasi waa waxa aan ugu yeeray dhadhan fiican. Waan jeclaa.
chrome waa qabow daaqadaha 8 sidaa darteed Firefox-ka oo tartiib tartiib ah daaqadaha 8 ayaa ugu fiican uguna dhaqsaha badan windows 8 lenovo
Sida Loo Helo Faylasha Qoraalka Oo Dhamaystiran Fudud ee Linux Distros